Dooddii ka taagnayd Abebe Aregawi oo halkeedii ka socota - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kaydka sawirrada: Malin Ewerlöf. sawir: NILS PETTER NILSSON
Dooddii ka taagnayd Abebe Aregawi oo halkeedii ka socota
Ewerlöf: Waa in baaris lagu sameeyo Aregawi
La daabacay tisdag 1 mars 2016 kl 13.30
Malin Ewerlöf oo haray u haysatay rikoorka oroddada 800 iyo 1 500 mitir ee Sweden oo ay ka qaaday orod-yahannadda Abebe Aregawi, iminkan lagu tuhun-san yahay inay isticmaashay maado ka xaaraantimeey-san ciyaartooyda inay isticmaashay ayaa soo jeedisay in dib u baaris lagu sameeyo habka ay rikoorradaa ku jebisay iyo weliba habka ay ku qaadatay dhalashada muwaadin-nimo ee dalka Sweden.
Abebe Aregawi ayaa jebisay labadii rikoor ee Malin Ewerlöf ee 800 iyo 1 500 ee mitir. Iyadoona iminka si xooggan uga dhiidhiday tuhunka laga qabo Aregawi inay isticmaashay maaddada moldonium.
– Aad ayaan uga argagaxay, waa sida aan oran karo. Waxaanan rajeeyn in dadyoowga wax is-daba mariya gacanta lagu dhigo. Mar walba oo arrimmaha noocan ah la soo ban-dhigo dareen aan wanaag-sanayn ayaa la dareemaa iyo iney jiraan dadyoow badan ee sidaa u dhaqma, sida ay sheegtay Malin Ewerlöf oo u warrameeysay laanta ciyaaraha ee idaacadda - Radiosporten.
– Doodo dhowr ah ayaa ka taagnaa habka ay ku qaadatay muwaadin-nimada dalka Sweden iyo inay xaqiiq ahaan doonayso inay u tartanto oo matasho Sweden. Waxaa jiray dareen ah in aanay damacsanayn sidii ay bulshada ku soo dhex geli lahayd, sida ay sheegtay Ewerlöf.
Rikoorrada oroddada oo ey dalka ku jebisay sidey kuula muuqdaan. May sii haysan kartaa mise waxaa loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo?
– Xaqiiqdii waxaan jeclaan lahaa in baaris lagu sameeyo. Iyo guud ahaan fikirkeedii ka dambeeyay inay Sweden timaado. Habka ay ku qaadatay muwaadin-nimada dalka iyo inay shuruudihii oo dhan ka soo baxday. Qaybahaasina waa kuwo loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo.
Aregawi oo liiska tartanka olompikada laga saarey